URulani ubongela iCAF ngokuhlabana ngoMotsepe - Impempe
URulani ubongela iCAF ngokuhlabana ngoMotsepe
March 15, 2021 Impempe.com
UPatrice Motsepe ephahlwe uManqoba Mngqithi noRulani Mokwena
Omunye wabaqeqeshi kwiMamelodi Sundowns, uRulani Mokwena, ujabulela bonke abathintekayo ebholeni lase-Afrika ukuthi bazoke bezwe ukuphathwa yindoda eqotho futhi ebabeka phambili ngaso sonke isikhathi abantu abasebenza ngaphansi kwayo.
Ubephawula ngokuqokwa kukaPatrice Motsepe njengomengameli omusha weConfederation of African Football (CAF) okwenzeke ngoLwesihlanu eRabat, eMorocco.
UMokwena usazi kahle isandla sikaMotsepe kwazise ubengumengameli wakhe kwiSundowns ngaphambi kokushenxa kulesi sikhundla njengoba esephethe ibhola lezwekazi lonke.
“Kusemqoka ukuthi sikujabulele ukuthi ibhola lase-Afrika lithole umholi ofana noMotsepe. Siyamhalalisela ekuqokweni kwakhe okumfanele. Siyazi ukuthi kumfanele lokhu futhi unawo amava okusibeka lapho sihlale sifisa ukufika khona njengabantu base-Afrika abazifela ngonobhutshuzwayo. Ungumholi oqotho futhi uhlale njalo ebabhekile laba abangaphansi kwakhe,” kusho uMokwena.
Ngokwalo mqeqeshi osiza uManqoba Mngqithi noSteve Komphela, akekho omunye obekufanele aqokwe ngaphandle kukaMotsepe.
“Akekho umuntu obefanelwe ukuqokelwa kulesi sikhundal ngakho sijabule futhi siyaziqhenya ngaye ngoba siyazi ukuthi ibhola lase-Afrika selize lafika ezandleni ebesikade sikhulekela ukuthi liphathwe izona. Umsebenzi asewenzele ibhola lakuleli uyakhombisa ukuthi nakanjani uzongena athi khaxa kulo msebbenzi.
“Uyazimisela uma enza umsebenzi futhi uhlale njalo ecabanga ngokuthi angayenza kanjani ukuthi impilo yalaba abaholayo ibe ngcono. Uqokelwe kulesi sikhundla nje yingoba umsebenzi awenze kuleli ukhombise i-Afrika yonke ukuthi nangu umuntu esimdingayo,” kusho uMokwena.
ISundowns esidlale amahlandla angu-24 ingayazi induku ngokwahlukana kwemiqhudelwano kule sizini, inomdlalo onzima womlenze wesibili weCAF Champions League ne-TP Mazembe ngoLwesibili ngo-6 ntambama, eLoftus Stadium.
Previous Previous post: OweSekhukhune ukwemukele ukuthola iphuzu kwiTuks
Next Next post: UMotaung uncoma iSilo ngendima esiyidlale eNingizimu Afrika